Ngwaahịa Manufacturers & suppliers | China Ngwaahịa Factory
Owlọ jụrụ oyi
Emechi Circuit Emechiri Emechi - Nzuko-eruba
Emechiri Emechi Loop Cowing Towers - Cross-flow
Ejiri Tlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu - Redị akụkụ anọ
Ebube raftlọ Egwuregwu Egwuregwu - -dị nke kalama
Clọ ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ dị jụụ maka ọgbọ nke ike
Ọgwụ Mmiri RO
Elu-arụmọrụ Evaporative ...
ICE MBR Membrane Module nke Industrial Wastewater Treatment for Jụrụ Tower System
Akpụkpọ ahụ Bioreactor (MBR) bụ ụdị nke elu uzu mepụtara ebe ọ bụ na njedebe nke narị afọ nke 20 nke ghọtara oru oma Nchikota nke akpụkpọ ahụ nkewa technology na ndu technology. The akpụkpọ ahụ nkewa technology dochie omenala ifịk ifịk usoro na nkịtị nyo unit; ike nkewa ike ya nwere ike ime ka ọgba aghara SS dị nso na-efu. Oge ijide hydraulic (HRT) afọ sludge (SRT) kewapụrụ kpamkpam; mmiri ọpụpụ dị mma ma kwụsie ike nke a ga-ejigharị na-enweghị ọgwụgwọ nke atọ. Nke sitere na mmiri akụ na ụba na nke bara uru yana nchekwa dị elu, etinyere ngwa ngwa nke mmiri na-eji mmiri mmiri.
Counter-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers
Ikuku ikuku jụrụ oyi na-abanye site na mkpọchi n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ elu ahụ na ala, ma na-adọta elu na n'elu igwe site na ike site na axial fan nke arụnyere n'elu, na-eme ka mmiri na-ada ada (si na usoro nkesa mmiri) ma na-amụba nnyefe arụmọrụ nke okpomọkụ na a ala nke na-ekpo ọkụ mmiri mmiri atara nke ụlọ elu n'ime ikuku. N'oge a na-arụ ọrụ a, obere mmiri nke na-ebugharị mmiri na-ekpochapụ n'ihi ntụgharị okpomọkụ zoro ezo site na ọkpọkọ na mgbidi nke eriri igwe, na-ewepu okpomọkụ site na usoro ahụ. Na nke a mode nke ọrụ, ruru ka evaporative arụmọrụ belata na-ahapụ mmiri okpomọkụ na onye ofufe ike azoputa.
Cross-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers
Dika ihe edeputara ederede ndi mmadu na-eme ka ikuku di ume oku, mmiri mmiri (mmiri, mmanu ma obu propylene glycol) ka eji mee ka obi di nma nke di n'ime nkpuchi ma adighi ekpughere ya na ikuku. Ihe mkpuchi ahụ na-eje ozi iji wepụta mmiri mmiri site n'èzí, na-eme ka ọ dị ọcha ma merụọ n'efu na akaghị emechi. N'èzí eriri igwe ahụ, mmiri na-agba mmiri n'elu eriri igwe ma jikọta ya na ikuku dị n'èzí iji wepụta ikuku ọkụ site na ụlọ elu dị jụụ gaa na mbara igwe dị ka akụkụ nke mmiri na-ekpochapụ. A na-ekesa ma jiri mmiri oyi dị n'azụ eriri mmiri ahụ wee jiri ya mee ihe: mmiri mmiri dị jụụ laghachiri na mmalite nke usoro iji banyekwuo ọkụ n'oge evaporating. Ọ na - enyere aka mee ka mmiri dị ọcha nke ga - eme ka mmezi ya na arụmọrụ ya belata.
Lọ Nche Na-eme Ka E Nwee Obi withtọ na Redị Na-ahụ Anya
Circuitlọ elu ndị na-eme ka obi jụrụ ikuku bụ ngwaọrụ ndị na-eji ụkpụrụ okike eme ihe: mmiri kacha nta na-ekpo ọkụ ọkụ site na evaporation a manyere iji mee ka ihe ndị dị mkpa dị jụụ.
Bottle Type Counter-flow Cooling Towers
Towerlọ elu ikuku sekit mepere emepe bụ onye na-ekpo ọkụ ọkụ, nke na-eme ka mmiri dị jụụ site na ịkpọtụrụ ikuku na ikuku.
A na-ebufe okpomọkụ site na mmiri gaa n'ikuku site na ntụgharị okpomọkụ dị mma, mana tumadi site na mbufe ọkụ na-ekpo ọkụ (evaporation nke akụkụ nke mmiri n'ime ikuku), nke na-eme ka o kwe omume iru okpomọkụ dị jụụ karịa ọnọdụ okpomọkụ.
Ihe eji abanye n'ime ulo iji nweta ike, HVAC buru ibu na ulo oru mmeputa
A na-ebute ụlọ elu ndị a na-eme ka mmiri jụrụ oyi, ụlọ elu ndị na-agafe agafe ma ahaziri dị ka ihe ndị ahịa chọrọ na arụmọrụ, usoro, ịkwọ ụgbọ mmiri, ike oriri, isi mgbapụta na ụgwọ echebara.
ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System
Usoro obi jụrụ na-emetụta ntụkwasị obi, arụmọrụ, na ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ usoro ụlọ ọrụ ike. Nlekota na ijikwa njikwa nke corrosion, deposition, microbial growth, na sistemụ arụmọrụ dị mkpa iji bulie Ọnụ Akwụ ụgwọ Ọrụ. Nzọụkwụ mbụ iji mezuo opekempe ọ na-ahọpụta usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị yana ọnọdụ ọrụ iji belata nrụgide sistemụ.
ICE Industrial Water Softener System maka Jụrụ Tower Source Water
Ime ka mmiri dị nro bụ usoro ịsacha mmiri nke na-eji teknụzụ mgbanwe ion ewepụ mineral ndị na-ahụkarị dị ka calcium na magnesium na mmiri iji gbochie ịbawanye ọkpọkọ na akụrụngwa. A na-eji usoro a eme ihe mgbe mgbe na ntọala azụmahịa na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji kwado ịdị mfe nke iji ya ma gbatịkwuo ndụ nke akụrụngwa mmiri.
ICE High arụmọrụ Sand Filtration System maka Jụrụ owlọ Elu 'Circulation Water Treatment
Akụkụ ndị na-ahụ maka ikpo ọkụ nke ikpo ọkụ dị obere karịa 5 microns. ICE elu arụmọrụ jụrụ ụlọ elu mmiri na-ewepụ ihe ndị a dị oke mma iji nye ezi uru nke mmiri jụrụ oyi.
Ice ulo oru osmosis usoro nke jụrụ igwe mmiri sistem
Osote Osmosis / RO bu uzo eji eme ihe iji wepu ihe ojoo na ihe ojoo site na mmiri site na iji ihe eji eme ka mmiri nke na-eme ka mmiri banye mmiri ma na-ahapụ ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị na-agbaze na ihe ndị ọzọ na-akpata. RO membranes chọrọ mmiri ka ọ nọrọ n'okpuru nrụgide dị elu (karịa karịa nrụgide osmotic) iji mee nke a
High-arụmọrụ Evaporative Condenser maka Industrial Refriji / Nzuzo Chain Usoro / HAVC System
KWES TOROL jụrụ igwe usoro
Dika ihe eji eme ka ulo oru ulo oru ulo oru ulo oru na ihe ndi ozo banyere ihe ndi ozo na mmiri ogwu, anyi ghotara na ndi oru na ndi ahia gha adighi gi nma, anyi g’enyere gi aka na ndu gi na ihe ndi ozo iji hu ahia gi ihe ịga nke ọma.
39lọ 392, Nke 698, Lane 1588, Zhuguang Road, Shanghai, China
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, jide n'aka na ị ga-ahapụ ozi maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro ụlọ elu dị jụụ na ngwọta mmiri.